Trump oo qabtay kulan 10 milyan loogu arruurinayo - BBC News Somali
Trump oo qabtay kulan 10 milyan loogu arruurinayo
Image caption Daryeelka caafimaadka ayaa ahaa mawduuca ugu ballaaran ee ay dadku ka mudaaharaadayeen
Madaxweynaha dalka Maraykanka Donald Trump ayaa huteelkiisa Washington ku yaalla ku qabtay kulan lacag loogu arruurinayay ol'olaha uu ku doonayo in dib loogu soo doorto 2020ka.
Dad mudaaharaadaya ayaa ku qaylyay markii madaxweynahu sii galayay huteelka iyaga oo ku leh "ceebaale".
Cid kaste oo ka qaybgalaysa kulankaas lacagta loogu arruurinayo madaxweynaha waxay bixin doontaa 35,000 oo doolar.
Qaar badan oo ka mid ah waxay ka xumaayeen qorshaha caymiska caafimaadka ee xisbiga Jamhuuriga iyaga oo soo qaatay boodhadh ay ku qoran yihiin "Daryeel caafimaad ayaan u baahannahay ee canshuur dhimis uma baahnin".
In lacag arruurinta lagu qabtay huteelka madaxweynaha ee Trump International Hotel ayaa sii kordhisay walaaca ku saabsan sidii loo kala ilaalin lahaa masuuliyadda iyo ganacsiga madaxweynaha.
Richard Painter oo ah garyaqaan dhanka anshaxa u qaabilsanaan jiray Aqalka Cad markii uu madaxweynaha ahaa George W Bush ayaa sheegay in aan la aqbali karin in madaxweynuhu uu ka faa'iido dhaqaale xalfadahan oo kale, huteel kale in uu kiraysto ayay ahayd ayuuna yiri.
Laakiin Kathleen Clark oo ah bare sare oo cilmiga sharciga ka dhiga jaamacadda University in St. Louis kuna takhasusay anshaxa dawladda ayaa wargayska USA Today u sheegay in madaxweynuhu uusan jabinin wax sharci ah.
Ma cadda in huteelka la siiyay lacag si munaasabaddaas loogu qabto.
Masuuliyiinta Golaha Qaran ee Jamhuuriga ayaa filaya in kulankaas ay ka soo baxdo 10 milyan oo doolar, waxaana loo baahan yahay 300 oo taborucaad.
Dhammaan lacagta lagu deeqo looma addeegsan doono ol'olaha doorashada Trump ee 2020ka oo kali ah ee qaar ka mid ah waxaa lagu qaban doonaa waxyaabaha kale ee xisbiga Jamhuurigu u baahdo.
Waa wax aan caadi ahayn in madaxweyne xilka ku cusub loo arruuriyo lacag dib loogu soo doorto, shan billood oo kali ah ayaana laga joogaa markii ganacsadahan uu xilka la wareegay.
"Dabcan mar kale in la soo doorto ayuu rabaa madaxweynuhu" ayay tiri Sarah Huckabee Sanders oo Arbacadii la hadashay saxafiyiinta.
Weriyeyaasha ayaa laga hor istaagay in ay ka qayb galaan kulankaas.